ဖုန်းလေးတစ်လုံးတည်းသာ အသုံးပြုပြီး သူမ ကိုယ်တိုင် အစအဆုံး ဖန်တီး ခဲ့တဲ့ ဗီဒီယို အတိုလေး တစ်ပုဒ်ကို ပရိသတ်တွေဆီ ချပြ လာတဲ့ ခြူးလေး - Real Gaming
ဖုန်းလေးတစ်လုံးတည်းသာ အသုံးပြုပြီး သူမ ကိုယ်တိုင် အစအဆုံး ဖန်တီး ခဲ့တဲ့ ဗီဒီယို အတိုလေး တစ်ပုဒ်ကို ပရိသတ်တွေဆီ ချပြ လာတဲ့ ခြူးလေး
ဇာတ် လမ်း တွဲ မင်း သ မီး လေး တစ် လက် ဖြစ် တဲ့ ခြူး လေး က “ ပန်း နု သွေး ” ၊ “ ပို ၍ လှသော မ နက် ဖြန် ” ၊ “ ပ ဉ္စ လက် ရွာ ” ၊ “ ချစ် ရ ပါ သော နွေ ” ၊ “ နွေ လည် ည ရဲ့ လ မင်း ” စ တဲ့ ဇာတ် လမ်း တွဲ တွေ နဲ့ အောင် မြင် မှု တွေ ရ ရှိ လာ တာ ဖြစ် ပါ တယ် ။
မ တူ ညီ တဲ့ ဇာတ် ရုပ် ကာ ရိုက် တာ တွေ ကို အ မျိုး မျိုး သ ရုပ် ဆောင် နိုင် တဲ့ ခြူး လေး က ဒီဘက် ခေတ် ရဲ့ အ နု ပ ညာ က ဝေ မ လေး လို့ တောင် တင် စား လို့ ရ ပါ တယ် ။
ခြူး လေး က လည်း သူ မ ရဲ့ ပ ရိ သတ် တွေ အ တွက် တစ် နေ့ ထက် တစ် နေ့ မ ရိုး နိုင် တဲ့ အ နု ပ ညာ အ သစ် တွေ ကို ချ ပြ ဖို့ ကြိုး စား နေ သူ တစ် ယောက် ဖြစ် ပါ တယ် ။
ဒီ က နေ့ မှာ တော့ ခြူး လေး က ဖုန်း လေး တစ် လုံး တည်း သာ အ သုံး ပြု ပြီး သူ မ ကိုယ် တိုင် အ စ အ ဆုံး ဖန် တီး ခဲ့ တဲ့ ဗီ ဒီ ယို အ တို လေး တစ် ပုဒ် ကို ပ ရိ သတ် တွေ ကို ချ ပြ လာ ပါတယ် ။
ခြူး လေး က “ သင် တန်း တက် ခဲ့ စဉ် က Project – 1 ( Who am I ? ) ဖုန်း လေး နဲ့ ဘဲ အ စ ဆုံး ကိုယ် တိုင် ဖန် တီး ခဲ့ ပုံ လေး ပါ ပေါ့ … နောက် ခံ တီး လုံး လေး အ ကြိုက် ဆုံး ….” ဆို ပြီး သူ မ ကိုယ် တိုင် အ စ အ ဆုံး ဖန် တီး ဖြစ် ခဲ့ တဲ့ ဗီ ဒီ ယို လေး ကို အ ခု လို ပဲ မျှ ဝေ ပေး လာ ပါတယ် ။
ခြူး လေး က တော့ ပ ရိ သတ် တွေ အ တွက် အ သစ် အ သစ် သော အ နု ပ ညာ တွေ ကို ချ ပြနိုင် ဖို့ အ တွက် အား သွန် ခွန် စိုက် ကြိုး စား နေ သူ လေး ပဲ ဖြစ် ပါ တယ် ။
ပ ရိ သတ် ကြီး လည်း ခြူး လေး ရဲ့ ဗီ ဒီ ယို လေး ကို ကြည့် ပြီး သ ဘော ကျ ကြ မယ် လို့ ထင် ပါ တယ် ။
ဖတ် ရှု ပေး ကြ တဲ့ ပ ရိ သတ် ကြီး အား လုံး လည်း သာ ယာ ပျော် ရွှင် တဲ့ နေ့ လေး တစ် နေ့ ကို ပိုင် ဆိုင် နိုင် ကြ ပါ စေ လို့ ဆု တောင်း ပေး လိုက် ပါ တယ် နော် ။
ဖုနျးလေးတဈလုံးတညျးသာ အသုံးပွုပွီး သူမ ကိုယျတိုငျ အစအဆုံး ဖနျတီး ခဲ့တဲ့ ဗီဒီယို အတိုလေး တဈပုဒျကို ပရိသတျတှဆေီ ခပြွ လာတဲ့ ခွူးလေး
ဇာတျ လမျး တှဲ မငျး သ မီး လေး တဈ လကျ ဖွဈ တဲ့ ခွူး လေး က “ ပနျး နု သှေး ” ၊ “ ပို ၍ လှသော မ နကျ ဖွနျ ” ၊ “ ပ ဉ်စ လကျ ရှာ ” ၊ “ ခဈြ ရ ပါ သော နှေ ” ၊ “ နှေ လညျ ည ရဲ့ လ မငျး ” စ တဲ့ ဇာတျ လမျး တှဲ တှေ နဲ့ အောငျ မွငျ မှု တှေ ရ ရှိ လာ တာ ဖွဈ ပါ တယျ ။
မ တူ ညီ တဲ့ ဇာတျ ရုပျ ကာ ရိုကျ တာ တှေ ကို အ မြိုး မြိုး သ ရုပျ ဆောငျ နိုငျ တဲ့ ခွူး လေး က ဒီဘကျ ခတျေ ရဲ့ အ နု ပ ညာ က ဝေ မ လေး လို့ တောငျ တငျ စား လို့ ရ ပါ တယျ ။
ခွူး လေး က လညျး သူ မ ရဲ့ ပ ရိ သတျ တှေ အ တှကျ တဈ နေ့ ထကျ တဈ နေ့ မ ရိုး နိုငျ တဲ့ အ နု ပ ညာ အ သဈ တှေ ကို ခြ ပွ ဖို့ ကွိုး စား နေ သူ တဈ ယောကျ ဖွဈ ပါ တယျ ။
ဒီ က နေ့ မှာ တော့ ခွူး လေး က ဖုနျး လေး တဈ လုံး တညျး သာ အ သုံး ပွု ပွီး သူ မ ကိုယျ တိုငျ အ စ အ ဆုံး ဖနျ တီး ခဲ့ တဲ့ ဗီ ဒီ ယို အ တို လေး တဈ ပုဒျ ကို ပ ရိ သတျ တှေ ကို ခြ ပွ လာ ပါတယျ ။
ခွူး လေး က “ သငျ တနျး တကျ ခဲ့ စဉျ က Project – 1 ( Who am I ? ) ဖုနျး လေး နဲ့ ဘဲ အ စ ဆုံး ကိုယျ တိုငျ ဖနျ တီး ခဲ့ ပုံ လေး ပါ ပေါ့ … နောကျ ခံ တီး လုံး လေး အ ကွိုကျ ဆုံး ….” ဆို ပွီး သူ မ ကိုယျ တိုငျ အ စ အ ဆုံး ဖနျ တီး ဖွဈ ခဲ့ တဲ့ ဗီ ဒီ ယို လေး ကို အ ခု လို ပဲ မြှ ဝေ ပေး လာ ပါတယျ ။
ခွူး လေး က တော့ ပ ရိ သတျ တှေ အ တှကျ အ သဈ အ သဈ သော အ နု ပ ညာ တှေ ကို ခြ ပွနိုငျ ဖို့ အ တှကျ အား သှနျ ခှနျ စိုကျ ကွိုး စား နေ သူ လေး ပဲ ဖွဈ ပါ တယျ ။
ပ ရိ သတျ ကွီး လညျး ခွူး လေး ရဲ့ ဗီ ဒီ ယို လေး ကို ကွညျ့ ပွီး သ ဘော ကြ ကွ မယျ လို့ ထငျ ပါ တယျ ။
ဖတျ ရှု ပေး ကွ တဲ့ ပ ရိ သတျ ကွီး အား လုံး လညျး သာ ယာ ပြျော ရှငျ တဲ့ နေ့ လေး တဈ နေ့ ကို ပိုငျ ဆိုငျ နိုငျ ကွ ပါ စေ လို့ ဆု တောငျး ပေး လိုကျ ပါ တယျ နျော ။